2014-02-16 ~ မောင်လေ့လာ | Free Download Software Full Version
အမျိုးသမီများအတွက် hair style psd
IN Photoshop - ON Saturday, February 22, 2014 No comments
ဒီတခါတော့အမျိုးသမီများအတွက် hair style
တဲ့ပုံလေးတွေမို့ photoshop ပြင်တဲ့သူတိုင်း အကြိုက်တွေ့ မှာပါနောက်လည်း
photoshop နဲ့ ပက်သက်မျှ Tool တွေ Effets တွေကိုဆက်တင်ပေးသွားပါမည်
Email ကဖတ်ချင်ရင် Email လိပ်စာထားခဲ့ပါ: FB ကဖက်ချင်ရင် like နှိပ်သွားပါ
DOWNLOAD အမျိုးသမီများအတွက် hair style psd
မြန်မာပြည်က Android ဖုန်းတွေအတွက် ရှိသင့်တဲ့ မြန်မာဆော့ဖ်ဝဲ
IN Android Application - ON Saturday, February 22, 2014 No comments
Android ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာဆော့ဝဲအလန်းလေးတစ်ခုထပ်မံထွက်ရှိလာပါတယ်။ ယင်းဆော့ဝဲရဲ့နာမည်ကတော့ MPT Gadget လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ တခြားဖုန်းငွေစစ်ဆော့ဝဲတွေလို ဆော့ဝဲလေးအနေနဲ့တင်အသုံးပြုနိုင်ရုံသာမက ဖုန်းရဲ့ Home Screen ပေါ်မှာပါ Widget Style အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုနိင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
စတာတွေကို MPT Gadget ဆော့ဝဲလေးတစ်ခုထဲနဲ့အကုန်လုပ်ဆောင်နိင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
INTERNET လျှောက်တာတို့ တခြား ၀န်ဆောင်မူတွေလျှောက်တာတို့ပယ်ဖျက်တာမျိုးတို့မှာ VERIFACTION FUNCTION ထည့်ထားတဲ့အတွက် MESSAGE မရောက်လဲသိအောင်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ MPT Gadget ကိုရေးသားသူကတော့
MPT Gadget v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 1)
MPT Gadget v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 2)
MPT Gadget v1.0 for Android အားရယူရန် (Link 3)
Credit : http://www.myanmarmobileapp.com/
IN Android နှင့် မြန်မာ Font - ON Saturday, February 22, 2014 No comments
ဒီလို flower_ psd file တွေလည်းလိုပါတယ် ပိုတိုရှော့သမားအတွက်
ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလို တော့ ပါဘူး ဒီလို flower_ psd file မျိုးကို
အမျိုးသမီးများပိုကြိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် အမျိုးသားများလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်
FB like ကိုအရင်နှိပ်ထား ဆက်တင်ပေးအုန်းမယ်
Download flower psd
အမျိုးသားများအတွက် dresses-psd အသစ်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဒီနေ့ တော့ photo shop ၀ါသနာတူ
ဘော်ဘော်များအတွက် dresses အမျိုးသားများအတွက်ဝတ်စုံ
အသစ်လေးတွေကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်မိမိတို့ ပုံလေးကို စတိုင်ကျကျ
စမက်ကျကျ ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ် photo shop သများအတွက် တော့
အကောင်းဆုံးသော psd file လေးပါ နောက်လဲ့ အသစ်တွေတင်ပေးဖို့ ရှိပါတယ်
လိုခြင်သေးရင် PB လေးကို like နှိပ်ထားပေါ့ နော် ဟီးးးးးးး
Download အမျိုးသားများအတွက် dresses-psd အသစ်
MakeUp Instrument 5.5 build 561 + Portable | 7.3 Mb +9Mb
IN Photo Editing - ON Friday, February 21, 2014 No comments
MakeUp Instrument -aset of tools for digital retouching portraits and to turn the geroinyusnimka in love with the cover ofaglossy magazine. With the proposed application, the user will be able to exposeaportrait ofacosmetic improvement, apply professional makeup and eliminate visible skin imperfections such as wrinkles, dark spots or scars.
photoeditor သမားအတွက်အလန်းစားပြုံပင်ဖို MakeUp Instrument 5.5 build 561 + Portable |
Image Editor MakeUp Instrument delivers exceptional performance and ease of use. The developers call their product "digital cosmetic," and proposedaset of functions only confirms the appropriateness of this analogy. The user can easily guess the appointment of tools such as «Lipstick» (gubnayapomada) or «Eyeliner» (eyeliner).
The user will have access to the more familiar tools that allows to rotate and zoom the image, adjust brightness contrast, remove, and clone the fragments, remove "red eye" and perform other standard manipulyatsii.MakeUp Instrument will give skinahealthy look, blur the individual picture area, while others make it more clear.
adobe photoshop portable ccs2 cs3 cs4 cs5 cs6 free download
IN Photoshop - ON Friday, February 21, 2014 No comments
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ တော့ photoshop ၀ါသနာရှင်
မိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်းများကို photoshop protable ccs2 cs3 cs4 cs5 cs6 ကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ် portable လေးဆိုတော့သုံးရတာပိုအဆင်ပြေတာပေါ
USB ထဲထည့်ပြီးသွားလေရာလည်းယူသွားလို့ ရတယ်
ကဲမိတ်ဆွေမျာ ကြိုက်တဲ့ ဟာကိုဆွဲသွားပါ
Flow Architect Studio 3D 1.8.4 Bilingual Full With Keygen
IN Design Tools - ON Friday, February 21, 2014 No comments
Flow Architect Studio 3D 1.8.4 Bilingual | 48 MB
ဒီကောင်လေးက 3D ဒီဇိုင်း
တွေ ဖန်တီးရာမှာ တကယ်ကို အစွမ်းထက်လှပါတယ်။ သူကိုသွင်းထားယုံနဲ့
အခြားလိုအပ်တဲ့ Plugin တွေ အထောက်ပံ့တွေ အများအပြားရရှိမှာဖြစ်ပြီး အသင့်သုံး
projects တွေ လည်း ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ အောက်မှာ
ဆက်ကြည့်လိုက်ကြပါဗျာ။ အဆင်ပြေကိုက်ညီမယ်ဆိုရင်လည်း ဒေါင်းယူသွားလိုက်ပါ။
Home Page - http://www.pixelplan.pl/index.php?pid=oferta
iPixSoft Flash Slideshow Creator 4.2.7.0 Full With Patch
IN Photo and Media Editor Tools - ON Friday, February 21, 2014 No comments
iPixSoft Flash Slideshow Creator 4.2.7.0 | 39 MB
ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေနဲ့ နောက်ခံ mp3 သီချင်းတွေထည့်ပြီး Flash slide show movie လုပ်ချင်သူများအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးပါလိုအပ်ရင်တော့အောက်မှာဒေါင်း
Engelmann Media Videomizer 2.0.14.218 Full With Crack
Engelmann Media Videomizer 2.0.14.218 Multilingual | 57 MB
ArcSoft Portrait Plus 3.0.0.402 | 36.5 MB
ဓါတ်ပုံထဲကမိမိတို့မျက်နှာတွေကိုအချောမွေ့ဆုံး ပြင်ဆင်ချင်သူတွေအတွက်တော့ ဒီကောင်လေးအကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ Photoshop ကျွမ်းကျင်စရာမလိုသလို အလင်းအမှောင်လည်းသိပ်သိထားစရာမလိုပါဘူး..သူထဲမှာပါဝင်တဲ့Toolsလေးတွေကမျှော်လင့် ထားတာထက် များစွာစွမ်းဆောင်နိုင်တာတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ချည်းသက်သက်အသုံးပြုလို့ ရသလို Photoshop Plug-in အဖြစ်ပါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
OS : Windows XP (SP2 or SP3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Sony ACID Music Studio 9.0 Build 40 Full With Keygen/Regkey
Sony ACID Music Studio 9.0 Build 40 Multilingual | 102 Mb
ArcSoft Portrait Plus 3.0.0.401 Full with Patch
IN Photo and Media Editor Tools - ON Thursday, February 20, 2014 No comments
Macrium Reflect Professional v5.2.6474 (x32 / x64) Full With Patch
IN Utilities - ON Thursday, February 20, 2014 No comments
Macrium Reflect Professional 5.2.6474 (x86/x64) | 87.4 MB
Macrium Reflect is complete disaster recovery and backup software for your home and office. Protect your personal documents, photos, audios and e-mails. Upgrade your hard disk or try new operating systems in the safe knowledge that everything is securely saved in an easily recovered backup file.
Macrium Reflect Main Information:
Restore to new hardware New
Windows PE 3.1 New
What's new Bug Fixes: 5.2.6474:
ပုံတွေကို Frame လှလှလေးတွေနဲ့ ဖန်တီးချင်
တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်Flowers Border Frame Free PSDလေး
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်photoshop သမားများအတွက် good ပဲဗျာ
ပုံကြည့်တာနဲ့ လန်ထွက်နေတာပဲ ဟိဟိဟိ။။။
DOWNLOAD Flowers Border Frame Free PSD
IN Photo and Media Editor Tools - ON Thursday, February 20, 2014 1 comment
Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 6673 Full With Crack
IN Recovery Software - ON Tuesday, February 18, 2014 No comments
Leawo Blu-ray copy 3.3.0.0 Full With Crack
IN Burning - ON Tuesday, February 18, 2014 No comments
Leawo Blu-ray copy 3.3.0.0 Multilanguage | 28.7 MB
· Copy Blu-ray movie to hard disk for backup
· 1:1 Blu-ray disc to disc duplication
· Create ISO image for your Blu-ray movie
· Smart Blu-ray DVD decryption
· Backup DVD-9, DVD-5 and CSS-DVD
· High speed Blu-ray DVD duplication
· Personalize disc label
· Automatic computer shutdown
· No system delay or resource hogging
· One-click operation, easy and fast
OS : Windows XP/Vista/7/8 Language : Multilingual
Photoshop သမားများအတွတ် coat ၀တ်စုံများ
IN Photo and Media Editor Tools - ON Monday, February 17, 2014 No comments
ဒီနေ့ အမျိုးသားများအတွက် coat ၀တ်စုံများ
၀တ်စုံတွေလည်းမတင်တာကြာပြီမို့ coat ၀တ်စုံအသစ်လေးတွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
DOWNLOAD>>>>>> link 1/ link 2
SuperRam 6.2.17.2014 Full With Patch
IN Windows ဆိုင်ရာ - ON Monday, February 17, 2014 No comments
PGWare SuperRam 6.2.17.2014 | 5.37 Mb
Video Booth Professional 2.5.7.6 Full With Crack
IN Internet Tools - ON Monday, February 17, 2014 No comments
Video Booth Professional 2.5.7.6 | 12.18 MB
IObit Driver Booster PRO 1.2.0.478 Full With Serial
IN Driver Software - ON Monday, February 17, 2014 No comments
IObit Driver Booster PRO 1.2.0.478 DC 17.02.2014 Multilingual | 15.9 MB
Aiseesoft PDF Converter Ultimate 3.2.6.22439 Full With Crack
IN Converter - ON Monday, February 17, 2014 No comments
Home Page -http://www.aiseesoft.com/pdf-converter-ultimate.html
Global Mapper 15.1.5 Build 021614 (x86/x64) Full With Patch
IN Photo and Media Editor Tools - ON Monday, February 17, 2014 1 comment
Global Mapper 15.1.5 Build 021614 (x86/x64) | 97/92 Mb
Download (x86)>>> Link1 (or) Link2 (or) Link3
Download (x64)>>> Link1 (or) Link2 (or) Link3
photoshop သမားများအတွက်အသင့်သုံးနိုင်ရန် Wedding PSD
background တခုထဲမှာပဲ layer တွေကိုစုထည့်ပေးထားပါတယ်
ကိုလိုချင်တဲ့ပုံလေးကို R / C ထောက်ပြီး layer နံပတ်ကိုရွေးပါ
MakeUp Instrument 5.5 build 561 + Portable | 7.3 M...
adobe photoshop portable ccs2 cs3 cs4 cs5 cs6 free...
Flow Architect Studio 3D 1.8.4 Bilingual Full With...
iPixSoft Flash Slideshow Creator 4.2.7.0 Full With...
Engelmann Media Videomizer 2.0.14.218 Full With Cr...
Sony ACID Music Studio 9.0 Build 40 Full With Keyg...
Macrium Reflect Professional v5.2.6474 (x32 / x64)...
Adobe Photoshop CC Lite 14.2.1 Multilingual Portab...
Acronis True Image 2014 Premium 17 Build 6673 Full...
IObit Driver Booster PRO 1.2.0.478 Full With Seria...
Aiseesoft PDF Converter Ultimate 3.2.6.22439 Full ...
Global Mapper 15.1.5 Build 021614 (x86/x64) Full W...
photoshop သမားများအတွက်အသင့်သုံးနိုင်ရန် Wedding P...
Paragon Hard Disk Manager 14 Suite 10.1.21.471 + B...
SlySoft AnyDVD & AnyDVD HD 7.4.3.0 Final Full With...
Animation Photo တွေပါပို့လို့ရလာတဲ့ Viber Version ...